Ngokuqinisekile, ngamunye wethu uzwile ngesifo esinjalo njenge-Plyushkin's syndrome. Ngendlela, wabizwa ngokuthi yisifo kuphela ngo-1966, ngenxa yemizamo yabacwaningi baseMelika Institute of Life. I-Plyushkin's syndrome yigama elisetshenziswe emazweni ethu futhi libonakala empilweni yansuku zonke ngenxa kaNikolai Vasilyevich Gogol kanye neqhawe le ndaba yakhe uPlyushkin.
AmaMelika abuye abize lesi sifo "messi syndrome" kusukela ngegama lesiNgisi elithi "messi", okusho "ukuphikisana, ukuphazamiseka". Ngaphezu kwalokho, ososayensi baseMelika emkhakheni wezinkinga zokugula ngengqondo uClark, Meinkikar noGrey banikeza lesi sifo igama elithi - i-Diogenes syndrome noma ububha bo-zhesindrom senile.
Kuzwakala sengathi kuyinto engcolile futhi engathandeki, ngakho-ke sizobe sisasebenzisa inothi elijwayelekile esihlokweni sethu - I-Plyushkin's syndrome. Ngendlela, njengoba lesi sifo singumdwebo, kumelwe kuthiwa kukhona isayensi, kungenzeka ukuthi, igama layo lezokwelapha-syllogism.
Okuyinhloko yale syndrome, njengoba abaningi bazi, ekuqoqeni (ukuqoqa) nokugcina inombolo enkulu yezinto zakudala nezingadingekile, ngokulula, okungenamsoco. Nakuba, mhlawumbe, kumuntu ogcina izinto ezinjalo, zibalulekile. Ososayensi, izazi zengqondo kanye nezifo zengqondo bakholelwa ukuthi le syndrome ingaba nezimbangela nezincazelo eziningana.
Okokuqala, imbangela ingase ibe ukuhlukumeza komuntu ekuqaleni, ikhanda noma imiphumela yokusebenza. Lena inkinga yangokomzimba. Izinguquko ku-lobe yangaphambili ziholele ngqo emiphumeleni enjalo.
Okwesibili, ubuso buyizinga eliphezulu kakhulu lomnotho kanye nokuthuthukiswa. Umuntu ukholelwa ngempela ukuthi lezizinto zingakwazi ukufika kahle. Lolu hlobo lwe-syllogism lungabonakali abantu asebekhulile kuphela, njengoba kuvame ukukholelwa, kodwa nakubantu abasha.
Okwesithathu, kunezimo lapho i-Plyushkin's syndrome eyadluliselwa khona njengefa, kanye nezinto eziqoqiwe kule minyaka. Lapha kubonakala ukuthi akuyona nje indawo yokufa, kodwa futhi nokuhlukunyezwa kwengqondo, isibonelo, ingane ebukele "ukuqoqa" konke ukuphila kwakhe kusuka kubazali babo.
Okwesine, le syndrome igxilile kakhulu ngokwesaba ubuphofu. Abantu abaningi asebekhulile kakhulu, basinda ekulaleni, ekuvinjweni nasempini, besaba kakhulu ukuphinde baphinde bazizwe. Ngakho-ke bazithengela ezindlini, izindlu kanye nama-dachas, ukuze bangakulahli. Zingaqondwa, ngoba abaningi balaba bantu baye bahlala ezimweni zokuntula okuphelele iminyaka eminingi futhi kamuva. Kodwa-ke, ngezinye izikhathi ukuqoqwa okunjalo kuba yindawo yokuhlala udoti, okungekho ukusetshenziswa kuwo.
Indlela yokususa kanjani i-Plyushkin's syndrome?
Ngokuvamile, lesi sifo asiphathwa ngezindlela ezijwayelekile nemithi. Ukwelashwa kufanele kube yilekhwalithi yokusiza kwengqondo kumuntu, ngaphandle kwamacala okuhlukunyezwa enhloko noma imiphumela yokuhlinzwa.
Akukho ukwelashwa okufanele kwenziwe ngaphandle kwemvume yesiguli esibhekene nalesi sifo. Kodwa abaningi balaba bantu abaziqapheli ngokuphelele ukuthi abagulayo noma abanengqondo ngokweqile futhi benqabe usizo. Into kuphela ongayenza kubantu abane-syllogism ukuzama ukulungisa ukuziphatha kwabo nokuqondisa "ukuqoqa" okunjalo endleleni efanele.
Mhlawumbe uzokwazi ukuthola indlela yokusiza umuntu ngezinto eziqoqiwe ukuba zingabi nobuhlungu. Isibonelo, ungathola ku-intanethi imiphakathi eminingi lapho kunabantu abadinga izinto eziningi. Ungakhohlisa umuntu ukuba ahlinzeke zonke izinto uma ezwela ngabo. Ngakho-ke, ungaletha izinzuzo ezibonakalayo kuwe nakwabanye abantu.
Lapho izinzwa zisemkhawulweni
Amabhisikidi nge ramu kanye omisiwe
Intwasahlobo enemfashini 2016: izingubo ezithakazelisayo zomama abalindele
Ukuphulukisa izindawo ze-hog uterus
Iqiniso nezinganekwane mayelana nokuncelisa
Ukucindezeleka kwonyaka njengoba imbangela yesisindo esiningi
I-sun cream evikelayo
Isaladi ngama-pears othosiwe no-anyanisi
I-Sauce kusuka ku-garlic eqoshiwe kanye nobhontshisi
Ukudla okuwusizo kakhulu futhi okumnandi kakhulu